Rakakwana mukana dzidziso nepachinko
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Rakakwana mukana dzidziso nepachinko
Muri sei asimbise guru raparadza iri nepachinko mukati, ndinofunga kuti vakawanda vevaya vari akarova pasina kufunga zvakawanda. Nepachinko Machine, iro zvino kuiswa mune nepachinko yokumusoro iri, isu tose tiri rotari jackpot zvakafanana rotari nzira.
uyu, vanova zvinoenderana zviitiko zviri indasitiri, iyo nepachinko muchina haadziviriri izvozvo, kuburikidza coercive kuburikidza pamwe isangano kuzoongorora zvose nepachinko muchina, hazvizovi kukwanisa kutengesa. Uye ayo wakatsunga rotari nzira, achitaura zvinhu, iwe rotari nzira zvizere mukana nzira. The
mathematically, anonzi akazvimirira miedzo. Nokuti jackpot rotari muna
nepachinko, pane gungano iri kuti chose asingashumbi rotari. In, yakakwana anongoitika wakakwana mukana zvazvingava hurongwa, kworudzii rotari zano chiri zvishoma nezveupenyu.
uye mukana uyu zvakakwana nzira, kamwe chete-nguva rotari iri yakazvimirira, ndiye nzira rotari asina kukanganiswa zvakapfuura nemigumisiro uye zvakafanana. Hazvina kuoma kunzwisisa zvishoma, asi Somuenzaniso, pane bhora Red uye zvitema uye chena.
kutanga kusvikira bhora anopinda, vatatu rotari balls vari kumativi ari zvishoma nezvishoma Roulette. Kana tsvuku ndiye Ndicho bhora kubva raparadza, nguva kuti akachinja mufananidzo rine nepachinko balls kutanga, kumisa Roulette, inova raparadza huru kuona kana paine red-bhora mumunda wacho pa.
Kana chena bhora ari pano, asi imi chokwadi usarasikirwe kuchaita kana akaisa mbiru raparadza zviri Roulette, uzere mukana nzira, nokuti haana kuchinjwa kare zvabuda, kudzokera Matamoto, rotari pasi chete ezvinhu nguva dzose kubva pakutanga voitakura kunze.
ari zvachose asingashumbi, anova vorudzii chinhu yakazvimirira rotari kamwe kamwe, ichi ndicho chii kuti uzere mukana nzira. Saka, kamwe iwe unoti hunonzi, 1000 nguva Hama Wakisi iri, 2000 nguva Hama wakisi, asi havana kuva tenderera kamwe, pavanoteka ezvinhu ndiye chete, vachava chete kuti nemhanza.
Zvisinei muchina, izvozvo It anoedza wekuita kuti nhengo jackpot mukana. Naizvozvo, muchina kana ukatevera kurasikirwa ndiko kuedza Kushumira rova. Ndicho chinhu akati kuva nefungu jackpot, iyo vakati zvakanaka mumigwagwa.
ramangwana kufembera, nekuti kudhonza ari jackpot, asi iwe tsvaka nani kubatwa nzira, ichi ndicho dambudziko. Tarisa migumisiro kare pakati jackpot, achakwanisa kuona sefungu simba uye akagumbuka, asi jackpot rotari chete kuitwa chero.
kunyange watetepeswa pamwero nguva, zvirokwazvo, chokwadi chokuti takunda kana chinangwa nguva ino, Iye anogona asina zvafanotaurwa, zvakadai kuti nepachinko zvakare. Sezvo
Hanemono iduku chitoro une Horukon sezvo CR muchina, ungada kuziva ndechokuti hwenguva mukana rotari. Kana wedzimba kuti chichakurukurwa dzaisiyana mukana of jackpot muna Horukon, asi zvirokwazvo pane chose mukana, asi imi mune kujairika nechirevo.